Bit By Bit - Kucherechedza maitiro - 2.3.3 Nonreactive
Chiyero muzvinyorwa zvemashoko makuru hazvikwanisi kuchinja maitiro.
Chimwe chinetso chekutsvakurudza kwevanhu ndechekuti vanhu vanogona kuchinja maitiro avo pavanoziva kuti vari kuonekwa nevatsvakurudzi. Masayendisiti ezvesuzhinji anowanzoti iyi reactivity (Webb et al. 1966) . Semuenzaniso, vanhu vanogona kupa zvipo mune zvidzidzo zvebhoratori kudarika zvidzidzo zvemasango nokuti munguva yekare ivo vanoziva kwazvo kuti vari kuonekwa (Levitt and List 2007a) . Chimwe chezvinhu zvakakura izvo vatsvakurudzi vakawanda vanowana vimbiso ndezvokuti vatori vechikamu havawanzoziva kuti dhenda ravo iri kutorwa kana ivo vakave vakajaira kuunganidzwa kwedata zvokuti havasisiri kuchinja maitiro avo. Nekuti vechikamu vari nonreactive, saka, mabhuku akawanda mashoko makuru anogona kushandiswa kudzidza maitiro kuti haana amenable kune yakarurama kuyerwa kare. Semuenzaniso, Stephens-Davidowitz (2014) akashandisa kupararira kwemashoko emadzinza mune tsvakurudzo yekutsvakurudza mibvunzo yekuenzanisa rudzi rwemarudzi munzvimbo dzakasiyana dzeUnited States. Izvo zvisingaiti uye zvikuru (ona chikamu 2.3.1) maitiro ezvitsvaga zvekutsvaga zvakagadziridzwa zvingave zvakaoma kushandisa dzimwe nzira, dzakadai seongororo.
Kusapindirana, zvisinei, hazvivimbisi kuti idzi idzi dzinofanirwa kuratidza mafambiro evanhu kana mafungiro avo. Semuenzaniso, semunhu anopindura mubvunzo unobvunzurudzwa-akabvunzurudza akati, "Handizvo kuti handina matambudziko, handisi kuisa pa Facebook" (Newman et al. 2011) . Mune mamwe mazwi, kunyange zvazvo mamwe makuru makuru ezvinyorwa ari asingabatsiri, haasi nguva dzose asingasunungurwi nehupenyu hwevanhu, chido chevanhu kuti vanoda kuzviratidza ivo nenzira yakanakisisa. Uyezve, sezvandichazotsanangura gare gare muchitsauko, maitiro akaiswa mumakuru makuru ezvinyorwa dzimwe nguva anokonzerwa nechinangwa chevadzidzisi vemapurisa, nharo yandichaidza algorithmic confounding . Pakupedzisira, kunyange zvazvo kusina kuyananisa kunobatsira kutsvakurudza, kutevera tsika dzevanhu pasina kubvumirwa kwavo uye kuziva kunomutsa kukanganisa kwehutano kwandinenge ndanyatsotsanangura muchitsauko 6.
Zvinhu zvitatu izvo zvandakangotsanangura-guru, nguva dzose, uye zvisingaiti-zvinowanzo, asi kwete nguva dzose, zvinobatsira pakutsvakurudza kwevanhu. Zvadaro, ndichadzokera kune zvinhu zvinomwe zvemashoko makuru makuru-asingakwanisi, asingakwanisike, asingatauriri, achikuvadza, anogadzirisa zvinyorwa, ane tsvina, uye ane hanya-izvo kazhinji, asi kwete nguva dzose, zvinokonzera zvinetso zvekutsvakurudza.